अखिर कुन कुन समयमा चिया पिउन हुँदैन ? | Radio Republic 88.2 MHz
Home जीवनशैली/स्वास्थ्य अखिर कुन कुन समयमा चिया पिउन हुँदैन ?
on: April 16, 2019 In: जीवनशैली/स्वास्थ्यNo Comments
तपाई चियाको सौखिन हुनुहुन्छ भने चिया पिउने सही समय पनि थाहा पाउनु जरुरी छ । किनकि, गलत समयमा चिया पिउनु तपाईका लागि घातक हुन सक्छ । गलत समयमा चिया पिउँदा त्यसले स्वास्थ्यमा धेरै नकरात्मक असर पुर्याउन सक्छ ।
अखिर कुन कुन समयमा चिया पिउन हुँदैन ? यहाँ उल्लेख गरिएको छः